Izindaba - Izimbangela zokudlidlizela nomsindo wohlelo lwe-hydraulic kanye nezinyathelo zabo zokuqeda
Kunemithombo eminingi yokudlidlizela nomsindo ohlelweni lwe-hydraulic, kufaka phakathi amasistimu womshini, amaphampu wokubacindezela, ama-valve wokubacindezela namapayipi. Ukudlidlizela nomsindo wohlelo lokwenziwa kwemishini Ukudlidlizela nomsindo kohlelo lokwenziwa kwemishini kudalwa kakhulu uhlelo lokudlulisela ngomshini olushayela i-hydraulic pump, ikakhulukazi kulezi zici ezilandelayo.
1. Ukungalingani komzimba ojikelezayo Ekusebenziseni okusebenzayo, iningi lama-motors liqhuba ipompo ye-hydraulic ngokusebenzisa ukuhlangana. Kunzima kakhulu ukwenza le mizimba ejikelezayo igcwalise ibhalansi enamandla. Uma amandla angalinganiseli emakhulu kakhulu, azophenduka Lapho enza ukudlidlizela okukhulu kokugoba komphimbo ojikelezayo nomsindo odala.
2. Ukufakwa okungalungile Uhlelo lwe-hydraulic luvame ukudala ukudlidliza nomsindo ngenxa yezinkinga zokufaka. Njengokusekelwa kwepayipi lesistimu elibi kanye nokukhubazeka kwesisekelo, noma ipompo ye-hydraulic kanye ne-shaft yemoto ayigxili, futhi ukuhlangana kukhululekile, lokhu kuzodala ukudlidlizela okukhulu nomsindo.
3. Lapho ipayipi le-hydraulic lisebenza, uma ukumelana kwepayipi lokudonsa uwoyela wokubacindezela kukhulu kakhulu, ngalesi sikhathi, uwoyela wokubacindezela usephuzile ukugcwalisa umgodi wokudonsa uwoyela wepompo, kubangele ukuvaleka okuyingxenye kokuncela kukawoyela umgodi nokwakha ingcindezi engemihle. Uma le ngcindezi ifinyelela nje emoyeni kawoyela Lapho ingcindezi yehlukaniswa, umoya owancibilika ekuqaleni emafutheni uzonqwabelana ngesamba esikhulu, kwakheke isimo samahhala samabhamuza omoya. Njengoba ipompo izungeza, lo oyili onamabhamuza omoya udluliselwa endaweni enomfutho omkhulu, futhi amabhamuza womoya abangelwa ingcindezi ephezulu. Nciphisa, phula futhi unyamalale, wakhe ukushaqeka kwengcindezi ephezulu yendawo
1. Ilunga lepayipi lokudonsa lepompo kufanele livalwe ngci ukuvimbela ukungena komoya;
2. Dizayina ngokunengqondo ithangi likaphethiloli. Ukuvimbela i-cavitation kuma-valve wokubacindezela I-cavitation yama-valve wokubacindezela yenziwa ikakhulukazi ukunciphisa ukumelana kwepompo. Izinyathelo ezisetshenziswa kakhulu zifaka phakathi ukusetshenziswa kwepayipi lokudonsa lobubanzi obukhulu, isihlungi esinamandla amakhulu, futhi ngasikhathi sinye ukugwema ukuvalwa kwesihlungi sikawoyela; ukuphakama kokudonsa kwepompo kufanele kube kuncane ngangokunokwenzeka.
3. Vimbela ukwenziwa kwesiyaluyalu nokuzulazula kwephayiphi. Lapho kuklanywa ipayipi lesistimu ye-hydraulic, isigaba sepayipi kufanele sizame ukugwema ukunwetshwa okungazelelwe noma ukusikwa; uma kusetshenziswa ipayipi eligobile, ububanzi balo bokugoba kufanele bube ngaphezu kokuphindwe kahlanu ububanzi bepayipi. Lezi zinyathelo Zombili zingavimbela ngempumelelo ukwenziwa kwesiyaluyalu nokujikijela kwepayipi.
Izingxenye zamayunithi kagesi zisetshenziselwa ukuhlinzeka amandla kuma-actuator, ikakhulukazi amaphampu wokubacindezela. Ngemuva kokuthi uketshezi lokukhipha ludlula kudivayisi ethile yokulawula nokulungisa (ama-valve ahlukahlukene wokubacindezela) kuya kuma-actuator, ama-actuator angaqedela izenzo ezithile, njengamasilinda wokubacindezela. Telescopic noma wokubacindezela motor ukuzungezisa!